လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးဇောကြီးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ယုန်လေးတို့အဖွဲ့ - Cele Platform
ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ယနေ့ထက်ထိရပ်တည်နေတဲ့သူကတော့ အဆိုတော်ယုန်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သီချင်းများဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးဟာ သီချင်းတိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရေးသားသီဆိုရုံသာမကပဲ အခြားသူများအတွက်လည်း သီချင်းများစွာကို ရေးစပ်သီကုံးပေးသူတစ်ယောက်ပါ။
ယုန်လေးဟာ ဂီတဘက်တွင်သာမဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများကိုပါ ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတိုင်းဟာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကိုရရှိထားတာပါ။ လတ်တလောမှာလည်း သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်၊ Kညီတို့နဲ့အတူ မာဖီးယားမြို့တော်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်တွင်လည်း မနေ့ညကဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုဝေမျှထားတာပါ။ ဒါကတော့ ” MC ကနေ ဦးဇော်ကြီး သတင်းကြားပြီး စိတ်မကောင်းတာနဲ့ MAFIA City မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး မြင့်မြတ် ယုန်လေး Kညီ ဘိုချမ်း စောကျော် လပြည့်တို့ MAFIA City အဖွဲ့သားများမှာ ၅သိန်း ရွှေလီ မှ မိန်းမိန်း မှ ၃သိန်း ပေါင်း ၈သိန်း ကူခဲ့ပါသည် ။အားလုံး Peace . ” ဆိုပြီးဝေမျှထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း ထပ်တူထပ်မျှကြည်နူးပီတိဖြစ်စေရန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
ဂီတလမျးကွောငျးပျေါမှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့အဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈယနထေ့ကျထိရပျတညျနတေဲ့သူကတော့ အဆိုတျောယုနျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့သီခငျြးမြားဟာ လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလကျြရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးဟာ သီခငျြးတိုငျးကိုကိုယျပိုငျဖနျတီးရေးသားသီဆိုရုံသာမကပဲ အခွားသူမြားအတှကျလညျး သီခငျြးမြားစှာကို ရေးစပျသီကုံးပေးသူတဈယောကျပါ။
ယုနျလေးဟာ ဂီတဘကျတှငျသာမဟုတျဘဲ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမြားကိုပါ ဒါရိုကျတာအဖွဈရိုကျကူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ဇာတျကားတိုငျးဟာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့တဈခဲနကျအားပေးခွငျးကိုရရှိထားတာပါ။ လတျတလောမှာလညျး သရုပျဆောငျ မွငျ့မွတျ၊ Kညီတို့နဲ့အတူ မာဖီးယားမွို့တျောဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရိုကျကူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျတှငျလညျး မနညေ့ကဝမျးသာစရာသတငျးတဈခုဝမြှေထားတာပါ။ ဒါကတော့ ” MC ကနေ ဦးဇျောကွီး သတငျးကွားပွီး စိတျမကောငျးတာနဲ့ MAFIA City မှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျဖို့ ချေါခဲ့ပွီး မွငျ့မွတျ ယုနျလေး Kညီ ဘိုခမျြး စောကြျော လပွညျ့တို့ MAFIA City အဖှဲ့သားမြားမှာ ၅သိနျး ရှလေီ မှ မိနျးမိနျး မှ ၃သိနျး ပေါငျး ၈သိနျး ကူခဲ့ပါသညျ ။အားလုံး Peace . ” ဆိုပွီးဝမြှေထားတာပါ။ ပရိသတျတှလေညျး ထပျတူထပျမြှကွညျနူးပီတိဖွဈစရေနျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload